China Factory Fanamboarana namboarina manokana 4 seza seza ary latabatra mahazatra frantsay Bistro trano fisakafoanana patio rattan ambadiky seza orinasa sy mpamatsy | Sun Master
Fambolena ivelany fanaka namboarina manokana 4 seza seza ary latabatra frantsay frantsay trano fisakafoanana patio rattan ambadiky seza
Model No.: WA － 4462
Refy: W47 * D57 * H90cm
Loadability: 680pcs / 40'HQ
lafiny W47 * D57 * H90cm
Marika MASTERAKA MASINA Loadability 680pcs / 40'HQ
Fitaovana lehibe Aluminium fantsom-dia28 * 1.7mmfonosana vovoka, vita vita amin'ny volotsanganaVoaroy UV rattan
1. Ny seza zaridaina Resin Wicker seza zaridaina miaraka amin'ny Frame ankafizin'ny Bambu dia iray amin'ireo seza fisakafoanana farany an'ny tokotany ivelany. Ny seza sy ny lamosina dia samy manenona PE rattan. Ny tady plastika sentetika dia mifanakaiky amin'ny rattan voajanahary, saingy azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava kokoa eo ambanin'ny masoandro. Matetika, azo ampiasaina mihoatra ny 2000 ora izy io. Noho ny toetrany mahatohitra UV, ny seza wanazy tanety dia safidy mety indrindra satria seza bistro frantsay ho an'ny trano fisakafoanana, cyber cafe, hotely ary efitrano fisakafoana hafa.
2. Ny alim-pandrefesana aliminioma misy sary hosodoko vita amin'ny volotsangana, welding ary poloney tonga lafatra mahatonga azy ho tsara tarehy amin'ny masoandro. Ny fefy vy dia mahatonga ny seza ho mavesatra lanja, stackable ary mora tehirizina. Ny famaranana ny vovoka dia manampy endrika tsy manam-paharoa amin'ny rafitra matanjaka.
Ny mpanamboatra fanaka any ivelany dia manana mpiasa efa za-draharaha mihoatra ny 100 amin'ny sehatry ny fanenomana. Ny ankamaroan'izy ireo dia manana traikefa mihoatra ny 10 amin'ny famokarana jiro any ivelany. Ny asa-tanana sy asa tanana mahafinaritra dia mitazona ny fanaka tsy hilentika sy mihinjitra.
3. Vokatra maintso: fikolokoloana tsy maharitra, maharitra ary mora, azo nosasana, lanja maivana ary mora mihetsika.
4. Seza ivelany any ivelany any amin'ny toeram-pisakafoanana any ivelany ho an'ny trano fisakafoanana fivarotana kafe, trano fisotroana, trano fisotroana, trano fisotroana sns.
Sun Master dia niasa manokana tamin'ny wicker rattan, fanaka tady ary fanaka vita amin'ny lamba vita amin'ny aliminioma sy fefy vy mifangaro amina karazana fitaovana toy ny hazo plastika sy ny hazo teaky.
Raha tianao ny santionany maimaim-poana, ny katalaogy misy ny lisitry ny vidiny tsara indrindra amin'ny endrika farany. Aza misalasala mifandray aminay amin'ny mailaka: terry@sunmaster.cn susan@sunmaster.cn
Teo aloha: Volavola maoderina vita amin'ny plastika vita amin'ny alim-baravarana vita amin'ny alim-baravarankely vita amin'ny alim-baravarana ivelan'ny trano Patio fisakafoanana seza 4-Piece Garden latabatra fanaka vita amin'ny varotra
Manaraka: Fivarotana mafana any ivelany azo iainana Chaise Lounge Elastic Rope tenona sunbed miaraka amin'ny ondana ho an'ny Hotel Poolside Beach Rattan Rope Sun Bed